Mugabe oo loo qabtay illaa Isniinta in uu isku casilo - BBC News Somali
19 Nofembar 2017
Image caption Mugabe iyo xaaskiisa Grace
Xisbiga talada haya ee Zimbabwe ayaa Robert Mugabe u sheegay in ugu dambeyn beri oo Isniinta uu banneeyo xilka madaxweynaha dalka. Waxay ugu caga jugleeyeen in ay ayaga xilka ka qaadi doonaan haddii uu iskii isu casili waayo.
Xisbiga maamula dalka Zimbabwe ee Zanu-PF ayaa Mugabe ka qaaday xilka hoggaaminta xisbiga.
Waxaa loo magacaabay in xisbiga uu hoggaamiye ka noqdo madaxweyne ku xigeenkii hore, Emmerson Mnangagwa - kaas oo laba isbuuc ka hor uu Mugabe ka ceyriyay xilka.
Weriyaha BBC-da Andrew Harding, oo kullanka ka qeybgalay ayaa duubay muuqaalkan ka dib go'aanka Mugabe shaqada looga tiray.
Dad dabaaldegaya ka dib markii Mugabe shaqada xisbiga Zanu=PF laga tiray